5 Qasabadaha Bannaanka ee ugu Fiican 2020-Jumladaha Jikada, Qasadaha Buuxi Weelka, Qasnadaha Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / 5 Qasnadaha Dibadda ee ugu Fiican 2020
5 Qasnadaha Dibadda ee ugu Fiican 2020
2020 / 08 / 28 QoondayntaTilmaamaha qasabada 11469 0
Iibsashada tuubad tayo sare leh oo bannaanka ka imaanaysa maahan shaqo fudud. Waxay qaadataa kaladuwanaansho kaladuwan iyo waqti si loo go'aamiyo xulashooyinka ku habboon waxa aad rabto sida ugu fiican. Haddii aadan haysan waqti aad ku sameyso falanqaynta, waxaad joogi kartaa meesha ugu wanaagsan. Liistada hubinta ee 5 taps ee dibedda ee ugu fiican sannadka 2020 ayaa laga yaabaa inay waxtar leedahay. Hoos ka daawo muuqaalka!
Horaantii aan bilaabi lahayn, waxay u badan tahay talo soo jeedin wanaagsan oo ah in fiiro gaar ah loo yeesho xulashooyinka muhiimka ah ee la raadinayo marka wax laga iibsanaayo qasabad albaabbada ka baxsan.
Sturdness - Arrin aad u xoog badan ayaa si toosa ula socota tayada sare. Badeecadaha qaarkood ayaa kaliya loo sameeyay inay kama dambeys tahay, waana tan ugu horreysa ee aad u baahan tahay inaad ogaatid. Uma baahnid inaad isweydaarsatid waqti ka waqti, iyo sidoo kale runtii ma jecli inaad laqabsato dukaameysiga beddelka marar badan. Markaad go'aansato inaad iibsato badeecadan noocan ah, waxay u baahan tahay inay noqoto mid ad adag, adkaysi leh oo tayo sare leh. Intaa waxaa sii dheer, xusuusnow dammaanadda iyo taageerada macaamiisha ee tuubada aad danayn ugu leedahay inaad wax u iibsato.
Hab fudud - Sida ugu dhakhsaha badan ee lagugu fulin karo soo iibsiga, qodobka ka soocaya run ahaantii isticmaalka sheyga ayaa ah dejinta. Taasi waa caqliga sababta aad ugu baahan tahay inaad dhageysato in tuubadu ay fududahay in la dhigo oo aad awoodid inaad sameyso. Qaabkan aad heshay waa inaadan ku bixin waqtigaaga iyo dhaqaalahaaga shaqaalaynta shaqaalaynta aqoonta leh si loo sameeyo, si kastaba ha noqotee waxaa suurtagal ah inaad adigu iska dhigto naftaada oo aad si dhakhso leh u isticmaasho.
Isugeyn wax ku ool ah - Marka lagu helo in lagu fulinayo soo iibsiga iyo dejinta, tuubada waa inay si sax ah u shaqeysaa. Taas oo macnaheedu yahay in dhaqaajinta biyuhu u baahan tahay inay fiicnaato, in heshiiska lagula macaamilo si habsami leh, oo ka hooseeya duruufaha cimilada. Weedho kaladuwan, heshiiska lala galayo wuxuu ubaahanyahay inuu noqdo mid sahlan si loo muujiyo, iyadoo la joojinayo adeegsiga wadad kasto oo dheeraad ah.
Intaa waxaa sii dheer, tubooyinka waa inaysan barafoobin xitaa marka banaanka la joogo. Taasi muhiimad gaar ah ayey leedahay haddii ay dhacdo inaad ku ekaato meel bannaan oo ah heerkulka uu hooseeyo. Marka, marwalba hubso inaad tixgeliso duruufaha cimilada.
Hadda oo aan diyaarinnay xulashooyinka ka dhigaya albaabbada albaabbada qurxoon qurxinta, waxaa la joogaa waqtigii loogu wareejin lahaa tusaalooyinka tusaalooyinka ugu wanaagsan suuqa xilligan.
1. Warshadaha Mueller 103-003 Dibedda Albaabada Fucet
img saadka: amazon.com
Badeecadani waxaa loo fahmay tayadeeda iyo qiimaheeda qaaliga ah. Weedho kala duwan, waxay u taagan tahay xasiloonida saxda ah ee udhaxeysa qiimaha iyo tayada sare. Haddii aad fiirineyso qasabad adag oo adkaysi u leh qasabadda banaanka, tani waxay ka mid tahay xulashooyinka ugu wanaagsan ee xilligan ka jira suuqa. Intaa waxaa sii dheer, naqshadeynta ayaa ah mid aad u fiican, shaki la'aanna waxaad yeelan doontaa hoos u dhac ku yimaada dhaqdhaqaaqa biyaha. Dejinta ayaa si fudud u fudud, maaddaama ay tahay mid u habboon saaxiibtinimo. Xaqiiqadan awgeed, waxaa suurtogal ah inaad adigu iska dhigto naftaada, adoo kaashanaya caawimaadda xirfadleyda. Markii xulashooyinka oo dhan la tixgeliyo, waa la ilaalinayaa in la yiraahdo waxay ka mid tahay baayacmushtariga ugu mashquulsan ee noocan ah noocyada kala duwan ee macaamiisha.
2. Prier P-164D12 Albaabada banaanka Fucet
Dhammaan ikhtiyaarrada ugu sarreeya ee xulashada badeecadani waa isticmaalkeeda fudud. Heshiiska waxaa loo rogi karaa si fudud, xitaa gudaha jawiga qabow. Marka, uma baahnid inaad ka careysiiso inaad geliso awood kala duwan ama dadaal aad ku isticmaasho. Tan ugu sarreysa, maahan inaad ka xanaaqdid inaad heshiiska jabiso haddii ay dhacdo inaad dalbato qadar xad dhaaf ah oo awood ah taas oo ka dhalatay taas oo ah mid iska caabin ah oo adag. Ka hadalka sturness, qasabadani waxaa laga dhigay final. Marka, haddii aad go'aansato inaad iibsato, waxaad u badan tahay inaad karti u leedahay inaad isticmaasho sannado. Inaanad tilmaamin runta inaad helayso damaanad nololeed. Waxay u badan tahay inay macquul tahay sababta ay qoysas badani u leeyihiin sheygan.
3. Xerada Xoriyadda 693-2 Albaabada Dibada Fucet
Haddii ay dhacdo inaad danaynayso inaad si wanaagsan u daryeesho beertaada, qasabadda Liberty Backyard waxay u badan tahay inay ka caawin badan tahay. Way kuu suurtogal tahay inaad ka faa'iideysato duruuf kasta, ama weedho kala duwan, macno malahan cimilada bannaanka, waa inay ku siisaa waxtarka ugu fiican. Way ka xoog badan tahay oo way iska caabin kartaa, hase yeeshee taasi kama dhigayso mid dhib badan in la isticmaalo. Wax yar oo iska soo horjeed ah, waa mid saaxiibtinimo leh waxayna ka dhigeysaa waraabinta beertaada mid lagu farxo oo fudud. Ta ugu sarraysa taas, socodka biyuhu waa fiican yahay, waana suurtogal inaad adigu si dhakhso leh u dhammaystirto shaqada. Marka la eego macnahaas, adeegsiga waa inuu kobciyaa wax soo saarkaaga ee la xiriira shaqooyinka noocan ah.
4. Firfircoon P-164D08Outdoor Faucet
img saadka: shopify.com
Dad badan ayaa xanaaqo markay tuubadu soo saarto dhawaq xad dhaaf ah markay shiddo. Haddii aad sidoo kale necbaatid qayladaas, waxaad ogaan doontaa sheyga saxda ah. Ganacsade Wadaadkan wuxuu sameeyaa dhawaq shanqar la'aan. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad jeceshahay sameynta il biyo ah oo ku yaal gurigaaga dambe, waxaa shaki la'aan laga yaabaa in lagu daro liiska hubinta ee arrimaha aad soo iibsaneyso. Intaa waxaa sii dheer, waa ay sahlan tahay in la istcimaalo, iyada oo la adeegsanayo heshiiskeeda ballaadhan ee taas oo ka dhigaysa mid la heli karo in lagu beddelo ama lagu joojiyo dadaal la'aan.
5. Homewerks VFF-ASP-C19PA Albaabada Dibada Ka Joogo
Qaboojinta tuubada dhibaato dambe ma noqon doonto. Tiro intee jeer ah ayaad waligaa ubaahatay inaad laqabsato arinta noocan ah? Badeecadan, waad iska indho tiri kartaa. Waxay leedahay mar labaad siphon kaas oo ka ilaaliya tuubooyinka qabowga xitaa marka heerkulku hooseeyo. Si kastaba ha noqotee, naqshadeynta caddaynta qaboojinta ma noqon doonto mid tayo sare leh oo keliya. Dhamaan itimaal ahaan mid ka mid ah sharraxaadda baahsan ee ay shakhsiyaadka u go'aansadeen inay iibsadaan qasabadani waxay ku jiifsataa tayadeeda iyo xurmaddeeda. Tan ugu sarreysa taas way fududahay mid kasta oo la dhigo oo la isticmaalo, iyo sidoo kale inaadan helin waa inaad waqtigaaga ku bixisaa isku dayga inaad hesho makaanik dejinaya. Waxaad gebi ahaanba sameyn kartaa naftaada.
Hore:: Maxay Tahay Qiimaha Kala Duwan ee Tuubooyinka Aad U Weyn Yahay Next: Hoyga hormarinta guryaha Kassy Shimotsu waxay dib u dhisaysaa jikadeeda
2021 / 01 / 10 1138
2021 / 01 / 10 851
2020 / 12 / 21 5304